Istanbul Metro inotakura 65 miriyoni mazana maviri mazana mazana emazana vanopfuura zviuru munaDecember | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulIstanbul Metro inotakura vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mairi mazana maviri emamongi zviuru munaDecember
13 / 02 / 2020 34 Istanbul, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, masangano, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metro, Metro Istanbul, TURKEY
Istanbul subways inotakura mamirioni zviuru zvevapfuura muna Zvita
Zvita 2019 Bhizinesi Performance Scorecard reMetro Istanbul rakaburitswa. Saizvozvo, Subways yeIstanbul yakatakura ndege 844 nemotokari 153 muna Zvita uye yakatakura 495 miriyoni mazana maviri mazana maviri emabhiza.
Turkey guru njanji opareta muguta Istanbul Metropolitan Municipality pamusoro Istanbul chikamu kubva Metro anoramba İstanbullular'l mashoko pachedu yakajeka uye vachazvidavirira matunhu neminisiparati kunzwisisa. Iyo Kambani yaDecember 2019 Operating Performance Score Card yakadhindwa.
Nhamba yeVapfuuri yakawedzera nemamirioni mazana matatu ezviuru kana achienzaniswa ne 2018
Zvinoenderana neizvi; Muna Zvita wa2019, mota makumi masere nemasere nemakumi mairi nemazana mairi nemazana mairi nemakumi mairi nemazana ma158 ndege dzakatakurwa pazviteshi gumi nemana nemashanu munzira dzeIstanbul. Kuverengeka kwendege hwaive zana nemakumi manonwe nemazana manomwe munguva yakafanana gore rakapfuura. Mota dzinofamba makiromita mazana masere nemakumi mairi munaDecember 844 dzasvika mazana masere emamirimita emamiriyoni pamwedzi mumwe chete gore rino. Nekuda kwekuedza uku, huwandu hwevaifamba, hwaisvika mazana matanhatu nemakumi matatu emakumi matatu emamiriyoni muna Zvita 153, hwakawedzera muna Zvita 495 uye zvasvika mazana matanhatu emakumi mairi nemazana maviri emazana.
Nhamba dzeNzira Dzakavambwa muNhambo iri Pamusoro Avhareji
Maererano nebasa rekuita kweMetro Istanbul, 2019 muzana yendiza dzakaitika muna Zvita 98.91. Nova-Comet, sangano repasi rese rekubatanidza maina makumi matatu nemasere pamakondinendi mashanu nhengo, yakanga ine nguva yekubhururuka kwe5 muzana.
Nguva yekupindura kuzvichemo kubva kuvafambi yakatarisana nemazuva mashanu yaive mazuva mazana maviri nemaviri. Avhareji yekudzoka kune zvichemo zvakatarisirwa naNova-Comet yaive yakawedzera mazuva gumi. Zvinoenderana nedatha iri mumushumo wekuita, huwandu hwezviitiko pamirioni imwechete dzakakwira munaDecember 5 hwaive huwandu hweNova-Comet pa2.5, nepo nhamba yeMetro Istanbul yakasvika 10.
YeMetro Istanbul yaZvita 2019 Bhizinesi Performance Scorecard CLICK HERE
Mamirioni mazana mashanu emakumi mashanu emamiriyoni emakubhiti emakoronga uye mazana masere emazana mazana maviri emakumi maBursa
Vapfuuri mazana maviri emamiriyoni vaifamba neKocaeli Veruzhinji Zvimotokari
1 mamiriyoni 200 vane chiuru chevatasvi vanotarisana mumigwagwa yeAnkara metro
Malatya ichiridza runyararo 1 mamiriyoni 200 vane zviuru
60 10 Zviuru Vatakuri Vanotakura Istanbul uye Ankara Metro
Ankara Metro Project Kuvaka mabasa kuri kuitika (M2) uye (M3)…
Iğdır Airport yakabata vanhu vanenge chiuru pagore
2 Million 200 Inoshandisa EGO MOBILE Chikumbiro ne Zviuru Zvikuru
3 Million 750 Zviuru Vanotasva Vanotungamirirwa Nezvitima paRamadan Festeri
Olympos Ropeway 200 zviuru zvevanhu vakatamira kumusoro
Iyo purojekiti uye akafungidzira mutengo wezvidzidzo pane Ankara Metro (M2) uye (M4)…
TCDD Ankara - Istanbul High Speed ​​Chitima Project 200 acak
Yambiro yeMwedzi makumi maviri nemana isingabhadharwe Catenary Fidia paTÜVASAŞ
Istanbul Bhasikoro Rokushandira Kunounza Vanoda Bhasikoro Pamwe